उषाकिरणलाई नेतृ उर्मिला अर्यालको सुझाब – प्रतिगमनकारी बनेकी आमाबाट विद्रोह गर !
माघ २१, काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री उर्मिला अर्यालले रामकुमारी झाँक्रीमाथि कारबाही गर्न गरिएको मागप्रति आक्रोश पोखेकी छिन् । उनले राष्ट्रपतिका झाँक्रीमाथि कारबाही गर्न खोज्नेको आन्दोलनले हिसाब किताब खोज्ने चेतावनी दिइन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृ अर्यालले महिलाहरुको समस्यालाई छोडेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चम्मा नबन्न झाँक्रीमाथि कारबाहीको माग गर्नेलाई चेतावनी दिएकी छिन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारी कहिल्यै पनि महिला मुक्तिको पक्षमा नलागेको पनि बताईन् ।
एक अर्को प्रसंङ्गमा अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी उषाकिरणलाई बाको साँचो सपना पुरा गर्न सडकमा आउन आव्हान गरेकी छिन् । उनले बाबुको हत्यारा खोज्न, निर्मला पन्तको बलात्कारी तथा हत्यारालाई खोज्न सडकमा आउनुपर्ने बताइन् ।
अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारी प्रतिगमनकारी कदममा लागिसकेको भन्दै छोरी उषाकिरणलाई विद्रोह गरेर मदन भण्डारी (बा)को सपना पुरा गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
‘म उशाकिरनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यो नौटन्की बन्द गर ! हालका प्रतिगमनकारी कदमको बिरुध्द सडकमा आएर अन्दोलन गर । त्यो नै तिम्रो बाबा प्रतिको निस्ठा हुनेछ ! प्रतिगमनकारी परिवार भए पनि आफू बाट बिद्रोह गर१ मदन भन्डारी कमरेडको सच्चा छोरी बन ! यो हाम्रो अह्वान हो !’, उनले भनेकी छिन् ।
रामकुमारी झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिकी छोरी उषाकिरणको प्रश्न – के मेरी आमाको रातो सारी फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ ?
अस्पतालबाटै ट्विट गर्दै बाबुरामले लेखे स्वास्थ्यबारे यस्तो जानकारी
फागुन १७, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादीका नेता डा.…
पिँडुला देखाएर सांसद भएको आक्षेप, कोमल वलीले भनिन् – रघुजी पन्त निकै दरिद्र सोंचका रहेछन्
फागुन १६, काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तको…
८१ वर्षीय आमाको राजनीतिक मोह
ओलीका सल्लाहकारको टिप्पणी – प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गोरु ब्याउनु जस्तै हो